Corporate Social Responsibility | IKBZ Insurance Co., Ltd.
ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီအုပ်စုသည် လူမှုရေးအထောက်အပံ့၊ ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် အခြားကဏ္ဍများဖြစ်သော တစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီ အဓိကအားဖြင့် နိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားသော ရေဘေး၊ ငလျင်ဒဏ်၊ မီးအန္တရာယ်၊ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းများနှင့် လူမှုရေး ပြဿနာများကဲ့သို့သော ရုတ်တရက် ပေါ်ပေါက်လာသည့် ဘေးအန္တရာယ်အဖြစ်အပျက်များကို ခံစားနေရသူများ၏ လိုအပ်ချက်များအတွက် ကူညီလှူတန်းမှုများကြောင့် လူသိများထင်ရှားပါသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘောဇအာမခံလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံနှင့်အဝှမ်း လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Official Sponsor for 27th SEA Games held in Myanmar
Under the name of Corporate Social Responsibility, IKBZ Insurance Co., Ltd. acted as the " Platinum Official Main Sponsor " for the 27th SEA Games (2013) held in Myanmar. Acting as co-sponser for " Platinum Officail Main Sponsor " with KBZ Group, the IKBZ Insurance Co., Ltd. charitably contributed USD 100,000 amongatotal sum of 2,000,000 USD by KBZ Group and actively contributed in terms of financil as well as human resources to KBZ Group in activities concerning SEA Games.
(၂၇) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပွဲတွင် အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူအဖြစ်ပါဝင်
ဤကဏ္ဍတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘောဇအာမခံလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီသည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသော (၂၇) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပွဲတွင် Platinum Official Main Sponsor အဖြစ် ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အပြင် ကမ္ဘောဇအုပ်စုမှ အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပွဲတော် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများအတွက် လှူဒါန်းသော အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂,၀၀၀,၀၀၀) တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၀၀,၀၀၀) ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
လူသားစွမ်းအင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်မှု
အာမခံလုပ်ငန်းအခန်းကဏ္ဍတွင် လူသားစွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘောဇအာမခံကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းသည် အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် JTJB တို့ ပူးပေါင်း ကျင်းပသော သင်တန်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်ကူညီခဲ့ပြီး အာမခံလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည်များကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် လိုအပ်သည်များကို သင်ကြားပို့ချခဲ့သည်။
Activity on Disasters
06 Aug 2015, Thursday
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘောဇအာမခံလုပ်ငန်းမှ မလေးရှားနိုင်ငံရှိ မြန်မာအလုပ်သမားများ အိမ်ပြန်ရောက်ရှိ ရေးအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁) သိန်းကို မြန်မာဒုက္ခသည် လွတ်မြောက်ရေးအစီအစဉ်သို့ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
Activity on Education
ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ပညာပေးအစီအစဉ်
၂၀၁၃ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘောဇအာမခံလုပ်ငန်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် မန္တလေးသို့ သွားရောက်၍ ဒေသခံပြည်သူများအကြား အာမခံလုပ်ငန်းအသိပညာမြှင့်တင်ရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာမခံမှ ဝန်ထမ်းများသည် ကမ္ဘောဇအုပ်စုမှ ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ ဘုရားရင်ပြင်တော်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများအား လစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။